@ Clear-Com သည်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် FreeSpeak Edge #AES နှင့် #NABShowNY 2019 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » @ ကိုရှင်းလင်းရန်-Com အမေရိကန် FreeSpeak Edge #AES နှင့် #NABShowNY 2019 ၏ပွဲဦးထွက် Presents
FreeSpeak Edge ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြိုးမဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးဖြေရှင်းချက်၏စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် FreeSpeak မိသားစုမှနောက်ဆုံးပေါ်ထို့အပြင်အဆိုပါဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအရှုပ်ထွေးဆုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစွမ်းဆောင်ရည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအချို့အတွက်အကောင်းဆုံးအသံအရည်အသွေးနှင့်အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကယ်တင်တတ်၏။
ALAMEDA, အမေရိကန်နိုင်ငံ - အောက်တိုဘာလ 3, 2019 - AES 2019 နှင့် NAB နယူးယော့ 2019 မှာ, Clear ကို-Com® US မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်က၎င်း၏မြေပြင်ကိုချိုးဖောက်အဆင့်မြင့်ကြိုးမဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်က FreeSpeak Edge ™သရုပ်ပြမည်, နှင့်လည်းအထောက်အပံ့အပါအဝင်အိုင်ပီ-based ထုတ်ကုန်များနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး, တင်ပြပါလိမ့်မယ် SMPTE 2110-30 ။
FreeSpeak Edgeစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ရန်, နောက်ဆုံးပေါ်ထို့အပြင် FreeSpeak ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြိုးမဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးဖြေရှင်းချက်၏မိသားစု, အရှုပ်ထွေးဆုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစွမ်းဆောင်ရည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအချို့အတွက်အကောင်းဆုံးအသံအရည်အသွေးနှင့်အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကယ်တင်တတ်၏။ အဆိုပါစနစ်, အသုံးပြုသူအဆင့်မြင့်ကြိမ်နှုန်းညှိနှိုင်းစွမ်းရည်နှင့် system ရဲ့ transceiver နှင့် beltpacks အတွက်အလိုလိုသိဒီဇိုင်းကိုအင်္ဂါရပ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာပေးသည်။
မြေပြင်ကိုတက်ကနေတည်ဆောက် FreeSpeak Edge ပင်အရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှုနေရာများနှင့်မြင့်မားသော multipath enviroments မှာအပြစ်ကင်းစင်စွာဖျော်ဖြေဖို့ 5GHz နည်းပညာ၏တန်ခိုးထဲကနေအလားတူ။ အဆိုပါစနစ်၏အားသာချက်ယူ Clear ကို-Com'' s ကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်အများစုပုံစံများမှကိုယ်ခံစွမ်းအားသောကြံ့ခိုင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလွှာများကို OFDM ကိုအသုံးပြုထားတဲ့သီးသန့် RF နည်းပညာ, ။ FreeSpeak Edge Ultra-အနိမ့်အောင်းနေချိန်နှင့်အတူရှင်းလင်း 12kHz အသံအရည်အသွေးကိုကယ်တင်နှင့်အကြီးဆုံးဘဏ်ဍာထားရှိရန် 100 beltpacks နှင့် 64 transceiver ကိုကျော်ကိုထောကျပံ့ဖို့နည်းပညာနှင့် bandwidth ကိုနှင့်အတူမြင့်မားအရွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနှင့်အတူချောမွေ့စွာပေါင်းစပ်နိုင်ပါ FreeSpeak II ကို 1.9GHz နှင့် 2.4GHz စနစ်များ, တစ်ခုတည်းပေါင်းစည်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကဖြတ်ပြီးသုံး bandwidth ပေး။
ဒါ့အပြင် NAB နယူးယော့မှာမီးမောင်းထိုးပြ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းဖြစ်ပြီး နေလကြတ်ခြင်း HX ယခုပံ့ပိုးသောဒစ်ဂျစ်တယ် matrix, SMPTE 2110-30 နှင့် AES67 Third-party အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ။ ဤသည်မှာထို့အပြင်စျေးကွက်အပေါ်အများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲနေသော All-IP ကိုအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးဖြေရှင်းချက်သို့ Eclipse HX စနစ်ကတိုးတက်မှု၏ပြီးစီးခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်။ Eclipse အတွင်းထူးခြားတဲ့အိုင်ပီ toolset အပါအဝင်အစွမ်းထက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုတစ်ဦးအကွာအဝေးကိုထောက်ပံ့ပေး: LAN / WAN / အင်တာနက်-based panel ကိုဖြန့်ကျက်; ရိုးရှင်း configuration ကို; ထူးခြားတဲ့အိုင်ပီ-based ကိုထိန်းချုပ်ယန္တရားများ HCI နှင့် Logic-Maestro ပါဝင်သည်; အဆိုပါ
တတိယပါတီ devices များ interface နှင့်မူတည်ပြီးမှစွမ်းရည်; LQ, SIP နှင့်အေးဂျင့်-IC ပေါင်းစည်းမှု; wireless နှင့်ကြိုး Interconnection များအတွက် AES67 ထောက်ခံမှု။
ဧည့်သည်ကိုလည်းမြင်ရပါလိမ့်မည် V-စီးရီး Iris က Panel ကို အရာကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သိသိသာသာလျှော့ချအောင်းနေချိန်နှင့်အတူအသုံးပြုသူမှအသုံးပြုသူထံမှအရည်အသွေးမြင့်မား, compressed လုပ်မထားတဲ့ AES67 အသံကယ်လွှတ်ခြင်းငှါစနစ်များကိုဖွင့်, IP ကိုစီးသုံးတစ်ပြိုင်တည်းပါ Full-duplex compressed လုပ်မထားတဲ့အသံကျော်ဆက်သွယ်ရေးကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင် LQ ™စီးရီး IP ကို ​​Interfaces ခင်းကျင်းပြသပါလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားအသံ-over-IP ကို ​​interfaces အသုံးပြုသူများကိုအသုံးပြုသူ configuration များပေါ် မူတည်. တစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဆက်သွယ်ရေးအချက်များနှင့်ထံမှအသံနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုများ, SIP နှင့်ကွန်ယက်ထိန်းချုပ်ရေးပွဲများ (GPIO) ရွှေ့ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေရန်ခွင့်ပြုသည်။ မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်နည်းပညာအမျိုးအစားပထဝီအနေအထားအရ-ကွဲပြားသောအသံနှင့်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေလုံခြုံ LAN, WAN သို့မဟုတ်ပင်ပြည်သူ့အင်တာနက်ကိုကျော် networked နိုင်ပါသည်။
ဤရွေ့ကားနှင့်ကျယ်ပြန့် Clear ကို-Com'' s ကိုကတခြားယုံကြည်စိတ်ချဆက်သွယ်ရေးဖြေရှင်းချက်အပေါ်သရုပ်ပြများအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် Clear ကို-Com'' s ကိုပြခန်းကို #828 AES 2019 နှင့်တဲမှာ #N140 ယာကုပ် K သည်မှာကျင်းပ NAB နယူးယော့ 2019 မှာ Javits မြစင်တာ။
Clear ကို-Com ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု က Ultra HD ဖိုရမ် 2019-10-03
ယခင်: AGTV ချီလီတီဗီစီးရီးထုတ်လုပ်ရန် Blackmagic ဒီဇိုင်းကင်မရာများကိုအသုံးပြု